Isitshayina Soups kwaye Teas ukuba Inzuzo Yakho Umzimba Ngexesha Pregnancy - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Isitshayina Soups kwaye Teas ukuba Inzuzo Yakho Umzimba Ngexesha Pregnancy
Makhe ubuso: ke akusoloko kulula ekubeni umfazi
Yethu eyodwa physiological iimpawu kusenokuba characterized kwi sine enkulu stages ebomini bethu: menstruation, pregnancy, wokuzalwa kwaye lactation
Ukuba ukhe ubene kwi-pregnancy kwethuba, unaso beautiful entsha baby abanokukhangela phambili, kodwa yesitalato kwaye hormonal utshintsho nisolko nomngeni kunye kusenokuba kakhulu ngumngeni, nonetheless.
Nge holistic indlela impilo, esiqhelekileyo Isitshayina amayeza recipes kusenokuba kakhulu beneficial ukuba lowering imingcipheko isifo kwaye uncomfortable imiqondiso ngexesha pregnancy. Ngexesha elifutshane cures ingaba kuluncedo, qhosha liyimfuneko aiming kuba elide, impilo entle ukuzonwabisa. Kutheni kuwuthabatha abanye ixesha unakekele umzimba wakho ke imiqondiso yosasazo, ngeli lixa noticing i-iziphumo ethile foods namachiza kwi umzimba wakho. Imizimba yethu ingaba zonke eyodwa, kwaye onjalo isifo enokuba ezahlukeneyo wenza kunye ezahlukeneyo abantu. Nkqu"egqwesileyo"postpartum yezosondlo izicwangciso akavumelekanga ukuba kulungela kuba wonke umntu, ngoko ke ahlawule vala efuna ingqalelo indlela umzimba wakho reacts ukuba iintlobo ezahlukileyo nokulawulwa kwamayeza namachiza yezosondlo izicwangciso. Namhlanje, sisebenzisa lwesiqulatho apho kugxilwa kwi esiqhelekileyo ezilungileyo Isitshayina soups kwaye teas - fantastic yendalo indlela umzimba wakho ukufumana izondlo ngayo iimfuno kunye wangaphambili kwaye emva kowe-pregnancy. Funda kwi kuba elicetyiswayo Isitshayina recipes ngokunjalo ingcebiso kwi njani unakekele umzimba wakho ke physiological iimfuno nge pregnancy nkqubo. Begin ukuthatha qaphela ka-imeko yakho menstrual emaphandleni ukusuka menstrual emaphandleni ubude kwaye ixesha, umbala, ukuvakala (ingqinqwa okanye watery), umqulu (nzima okanye ukukhanya). Ukongeza, nakekela na njengokukhapha iimpawu ezifana menstrual cramps, igazi clots, swelling, emva intlungu, breast swelling, njalo-njalo. Nazi ezimbini kujike ngokufanayo imibandela ukuba ingaba echaphazela loomama chances ngokuba pregnant namhlanje: Ngexesha akunakwenzeka ukuba baguqukele emva kwexesha, singakwazi ukulawula ubungakanani usamuel sisebenzisa experiencing. Kubalulekile hayi imeko yethu ngenyanga"visitor"njengoko zethu menstrual iyajikeleza ingaba ngokusondeleleneyo enxulumene nokuba ngaba okanye hayi siyakwazi ukuba kumitha.
Ekubeni nako zichaziwe kwaye vent zethu emotions kwi isempilweni indlela kanjalo eluncedo ekuphuculeni umgangatho wethu menstrual emaphandleni kwaye chances ka-conception.
Mna recommend besela yenyuka iti (linceda liver ukuba rectify qi kwaye ukulawula menstruation) ukuya kwi-iveki enye phambi yakho kulindeleke xesha.
Yokulungiselela indlela: Rinse zonke ingredients thoroughly
Oku iti ngu-ingakumbi soothing kuba abo phantsi enkulu isixa-mali usamuel. Umzimba wakho uyaya ngokusebenzisa ezininzi utshintsho ngexesha phambi kwexesha pregnancy ukuba adapt ukuba lokukhula fetus.
Ngexesha lokuqala iinyanga ezintathu, yakho baby ke ubungakanani andisayi kunyuka kakhulu kakhulu, ngoko ke kukho ayonto kufuneka ngoko nangoko begin amehlo ngakumbi.
Kwi-umahluko, nibe amava ngokugqibeleleyo eqhelekileyo pregnancy iimpawu ezifana ngentsasa sickness, dizziness, sindululo sickness kwaye jikelele nausea, ngoko kuyacetyiswa ukuba ufuna kudla ezincinane, rhoqo nsnp endaweni. Ukuba ufaka experiencing buhlungu imiqondiso, nibe cinga ezama ingcebiso esuka kugqirha okanye ebhalisiweyo Isitshayina amayeza practitioner. Cook egg emanzini kwaye susa yemiyalelo. Kuthululela, ml engqele amanzi kwi imbiza, yongeza ingredients, kwaye cook phezu phezulu ubushushu de boiling.
Tshintshela low ubushushu kwaye cook ngeyure enye, ukongeza ikhristali sugar ukuba incasa. Ukususela anesihlanu inyanga onwards, fetus uba ngakumbi iityuwadefault colour yayo, ukukhula accelerates.
Njengoko yakho baby iyakhula, yakho intestines kuba kujike crowded, ezikhokelela bloating, ezichaphazelekayo bowel movements, kwaye nkqu constipation. Ukuba ufaka experiencing nzima kwaye eyomileyo stool, okanye ezinye ubushushu olunxulumene iimpawu ezifana bloodshot amehlo, eyomileyo umlomo, canker phambi okanye pimples, kufuneka uzame ukuphepha amehlo foods ukuba ingaba zinokuphathwa kwi-indalo, kuquka peanuts, curry kwaye spicy ukutya. Kanjalo, njengoko ngakumbi Qi kwaye Igazi ngu concentrated kwi nourishing i-fetus, kubalulekile nakekela ukuba Isitshayina Spleen kwaye Liver ukuphucula igazi kwaye qi imveliso ukuze ngcono akondla i-tendons (ngaphantsi sifuna encounter leg cramps).
Yokulungiselela indlela: Rinse zonke ingredients thoroughly.
Tan-fry ucocwe intlanzi nge-oli, giraffe kwaye entlakohlaza itswele kwi omabini de ngocoselelo indlela, ngoko ke kuthululela, ml amanzi kwi imbiza. Dibanisa zonke ingredients kwaye cook phezu phezulu ubushushu de boiling. Tshintshela low ubushushu kwaye cook kuba i-ezongezelelweyo. zintlanu iiyure Yongeza salt ukuba incasa. Yokulungiselela indlela: Rinse zonke ingredients kwaye finely sika figs. Kuthululela ml amanzi kwi imbiza kwaye yongeza pine nuts, figs, kwaye rice.
Cook phezu phezulu ubushushu de amanzi ebila.
Ngoko tshintshela low ubushushu kwaye cook kuba amathathu imizuzu, okanye kude kube congee reaches a enqwenelekayo ukungaguquguquki kwesiqulathi.
Ekugqibeleni, yongeza omnyama sesame ngumgubo. Yamandulo Isitshayina ubulumko ichaza ukuba"yingqele"foods ingaba ekhethiweyo kuba abafazi kuzo emva kwexesha pregnancy, kodwa kubalulekile re-emphasize ukuba esiqhelekileyo Isitshayina amayeza ukholwayo elizwini syndrome differentiation kwaye treating ngamnye ukugula kunye olufanelekileyo ulungiso kunye amayeza. Imizimba yethu ingaba eyodwa, kwaye kanjalo tshintsha ngexesha ezahlukeneyo amathuba yethu ebomini. Abafazi kunye weaker-siseko kumele kuphetshwe amehlo kakhulu kakhulu"yingqele"ukutya ngexesha lonke pregnancy. Oku kuquka"yingqele"foods ukuba ingaba rhoqo"elicetyiswayo"kuba abafazi kuzo emva kwexesha pregnancy, ezifana watermelon, ingca ibhitumeni kwaye umkhenkce cream. Enjoying ezi foods kanye ngeveki owamkelekileyo, kuxhomekeke kwizicwangciso zakho umzimba-siseko. Ukulungiselela Nabasebenzi, nayo eluncedo ukusela omnye indebe rice iti okanye lithambile-natured soup yonke imihla kule nyanga, kwaye azibandakanye kwi phakathi cardio basebenzise ezifana ehamba okanye nokuqubha. Yokulungiselela indlela: Rinse zonke ingredients thoroughly. Kuthululela, ml amanzi kwi imbiza, yongeza ingredients, kwaye cook phezu phezulu ubushushu de boiling. Tshintshela low ubushushu kwaye cook kuba i-ezongezelelweyo - imizuzu. I-iti lilungile xa amanzi ajongise a milky umbala omhlophe. Kubatshisa kuphela amanzi musa ukugcina overnight. Oku iti ngu ezilungele kuba lonke usapho. Rice iti ingaba lula kuba Isitshayina spleen ukwaphula phantsi kwaye absorb, njalo yenza omkhulu ichiza kuba umzimba wakho ukuze achache ukusuka na isigulo, ingakumbi diarrhea okanye ngokulula ukusuka elide mini. Cinci Leung, Celebrity intloko practitioner ngalo EC Eklinikhi, iya kuthabatha inyathelo elinye ngakumbi kwi-enhancing yamandulo ukuba yi-ukudibanisa zemveli Empuma iindlela kunye bale mihla Western methodologies. Yakhe engundoqo injongo ngalo EC Ekliniki ngu ukubuyisela indlela patients usebenzisa iindlela ukuba bridge eyona kunye worlds. Thina scour, sweat, tsala strollers phezulu kwaye phantsi iinduli kwaye brave i-queues kwi-MTR, nje ukuzisa kuni iindaba ezintsha kwi yintoni zinokuphathwa ehlabathini ka-parenting kwi-Hong Kong.
विदेशी मामलाहरु को मंत्रालय, सिंगापुर - वाणिज्य दुतको कार्यालय-जनरल को गणतन्त्र को सिंगापुर मा गुआंगजौ